ထိရောက်သောသက်သာသက်သာစေရေးခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းသဘာဝဆီမွှေးကိုတရုတ်ဆေးပညာ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းစွာ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
$9.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $16.99
ထိရောက်သောကယ်ဆယ်ရေးခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းသဘာဝဆေးရည်တရုတ်ဆေး backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - Scorpion Venom, rhizoma homalomenae, safflower, turpentine ဆီအရည်, menthol ။
ကြွက်သားများနာခြင်း၊ ကြွက်သားများနာခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်များခြင်း၊ သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်း၊
အသုံးပြုခြင်းနှင့်သောက်သုံးခြင်း - အရေပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအချို့သောမုန့်များကိုစုတ်ယူပြီး၎င်းကိုလုံးဝစုပ်ယူသည်အထိအကြိမ်ကြိမ်ပွားပါ။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 20g / box ကို
အာရုံ - ၎င်းသည်ပြင်ပအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကိုအတွင်းထဲသို့မမျိုချနိုင်ပါ။ အရေပြားပြproblemsနာရှိသူများသည်၎င်းကိုမသုံးစွဲရန်တားမြစ်ထားပါသည်။
တားမြစ်ခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်ဤထုတ်ကုန်များနှင့်ဓာတ်မတည့်သူများအားလုံးကိုမသုံးစွဲရ။
ပါဝင်သည် - 1pcs Pain relief Cream
36 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ငါကြိုးစားခဲ့သည်တိုင်အောင်, တပြင်လုံးကိုလာ, ငါနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ် add ပါလိမ့်မယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! ဆီမွှေးစူပါမားကေ့စ်သည်နာကျင်မှုမှအမေကိုပခုံးပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
အလွန်အရည်များသာ Balm ကြယ်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ newralgia ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အခါခေါင်းကိုက်ခြင်းမကူညီဘူး။